Madaxweyne Silaanyo oo dhaqangeliyay Xeer-nidaamiyaha Diiwaangelinta Muwaadiniinta | Berberanews.com
Home WARARKA Madaxweyne Silaanyo oo dhaqangeliyay Xeer-nidaamiyaha Diiwaangelinta Muwaadiniinta
Madaxweyne Silaanyo oo dhaqangeliyay Xeer-nidaamiyaha Diiwaangelinta Muwaadiniinta
Madaxweynaha Jamhuuriyada Somaliland Mudane, Axmed Maxamed Silaanyo waxa uu Xeer madaxweyne oo sumadiisu tahay JSL/M/XERM/249-2560/062014 ku dhaqan-geliyey Xeer-nidaamiyaha Diiwaangelinta Muwaadiniinta.
Muwaadin: Waxa looga jeedaa qofka ka isiran dadkii deganaa geyiga Somaliland 26-kii bishii 6-aad 1960-kii iyo wixii ka horeeyey iyo qofka sifo sharci ah lagu siiyey Jinsiyada Somaliland.
Wasiir: Waxaa looga jeedaa Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha.
Madaxweyne: Waxaa looga jeedaa Madaxweynaha Jamhuuriyada Somaliland.
Wasaaradda: Waxaa looga jeedaa Wasaaradda Arrimaha Gudaha.
Diiwaangelin: Waxaa looga jeedaa habka lagu uruurinayo xogta muwaadiniinta ee lagu gelinayo isla markaana lagu kaydinayo Diiwaanka Qaranka oo ay meel-marinayso Wasaaradda Arrimaha Guduhu.
Diiwaanka Qaranka: Waxaa looga jeedaa diiwaan lagu kaydiyo dhammaan magacyada muwaadiniinta la diiwaangeliyey.
Xog: Waxaa looga jeedaa macluumaadka laga qoro qofka ee ku xusan Qodobka 11aad ee Xeerkan.
Foomka Diiwaangelinta: Waxaa looga jeedaa waraaqda ku xusan Qodobka 11aad ee
Xeerkan ee lagu qorayo xogta muwaadinka.
Dhaqan-gelinta Diiwaanka Qaranka ee Muwaadiniinta
Waxa Xeer-nidaamiyahan lagu dhaqan-geliyey Diiwaanka Qaranka ee Muwaadiniinta kaas oo looga gol-leeyahay in:
A. Lagu diiwaan-geliyo muwaaddin kasta oo gaadhay da’da 16 jir.
B. Uu noqdo meel lagu kaydiyo isla markaana lagu xafido xogaha laga qoro muwaaddinka.
Diiwaanku waa hanti qaran, waxaana uga masuul ah Wasaaradda Arrimaha Gudaha.
Dadka Xaqqa U Leh in la Diiwaangeliyo
Waxaa xaq u leh in la diiwaangeliyo muwaadin kasta oo gaadhay da’da Lix iyo Toban jir.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa u xilsaaran ansixinta Diiwaan-gelinta Muwaadiniinta ee goob kasta.
Ilaalinta Xogta la Diiwaangelinta
1. In xogta muwaadiniinta dalka laga saaro.
2. In aan daaha looga qaadin cid aan xeer awood u siin.
3. In wax laga beddelo hadaan ogolaanshiiyo laga helin cidda ka mas’uulka ah.
Daabacaadda iyo Xarunta Diiwaanka
1. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa ka masuul ah habaynta, dhaqan-gelinta iyo daabacaadda diiwaanka muwaadiniinta.
2. Diiwaanka guud waxa lagu haynayaa Xarunta Wasaaradda Arrimaha Gudaha, waxaana maamuli doona waax gaar ah oo uu madax ka yahay mas’uulka diiwaanka oo uu magacaabayo Wasiirka Arrimaha Guduhu.
Sugitaanka muwaadinka waxaa loo raacaya sidan soo socota:
1. Qof kasta oo raba in uu is diiwaan-geliyo waxaa xajiinaya Caaqilka, waxaana ansixinaya Wakiilka Maxkamadda ee Goobta ka dib markuu sidaa ku dhaariyo Caaqilka.
2. Marka ay sugnaato Muwaadinnimada qofka is diiwaangelinaya, waxa mas’uulka Goobtu xogta muwaadinka gelinaya foomka rasmiga ah ee Diiwangelinta.
Foomka diiwaan-gelinta ayaa sal-dhig u noqonaya diiwaan-gelinta Muwaadinka, iyada oo dhammaystiran ayuunbaa la gelin karaa diiwaanka.
Foomka Diiwaan-gelinta waxa lagu qorayaa xogaha hoos ku qoran ee muwaadinka:-
1. Magaca qofka oo afaran.
2. Taariikhda dhalashada iyo goobtiisa dhalashada.
3. Lab/dhedig midkuu yahay.
4. Sawirka qofka.
5. Lambarka taxanaha ah ee Warqadda Aqoonsiga.
6. Taariikhda uu dhacayo.
8. Tix-raaciisa Lambar.
9. Taariikhda la bixiyey.
10. Ciwaanka qofka.
12. Faraha ama Isha.
13. Sawirka wejiga ee qofka.
14. Saxeexa soo saaraha.
15. Saxeexa Muwaadinka.
Waxa la cayimayaa Goobo Diiwaangelineed, waxaana la dejinayaa nidaam lagu kala garto goobaha iyada oo la siinayo Degmo kasta tirsi lambar oo u gaar ah.
Bilawga hawl-galka diiwaangelinta Muwaadiniinta waxa sal-dhig u ah qoddobadan soo socda oo ay waajib tahay in la dhammaystiro.
In loo raaco Diiwaangelinta heerarkan ama jaranjarooyinkan:
1. Marka diiwaan-gelinta la sammaynayo waa in la sugo Muwaadinnimada Qofka Somalilanderka ah.
2. Marka ay sugnaato Muwaadinnimada qofka is diiwaangelinayaa, waxa la gelinayaa xogtiisa form-ka rasmiga ah.
3. Waxa isla goobtaasi lagu siinaya qof kasta oo ay sugnaato muwaadinnimadiisu warqad aqoonsi oo ku-meel gaadh ah.
4. Qofkasta oo ku guuldaraysta in uu sugo Muwaadinnimadiisa waxa lagu war-gelinayaa in uu keeno qof la yaqaan oo Hanti ma-guurta ah ku leh Deegaanka/Dalka, oo caddeeya in uu yahay muwaadin Reer Somaliland ah, kuna dammiinto hantidiisa.
Nidaamka Diiwaangelinta Muwaadinka.
Maalin kasta inta aan la furin goobta diiwaangelinta waxaa mas’uuliyiinta Goobta ku waajib ah:-
1. In ay is-xaadiriyaan, islamarkaana ay saxeexaan qalabka diiwaangelinta iyagoo diiwaangelinaaya lambarka tixraaca Foom-ka Diiwaan-gelinta ee ay maalintaa ku shaqaynayaan.
2. Marka shaqo maalmeedka la soo gebagebeeyo waa in qoraal lagu cadeeyo tirada muwaaddiniinta la diiwaangeliyey maalintaa, isla markaana saxeexaan.
3. Inay diiwaan-geliyaan dhacdooyinkii ay la kulmeen.
Iyada oo la adeegsanayo dhammaan hababka warbaahinta kala duwan ee ka jira dalka:
1. Waa in la daabaco, islamarkaana la baahiyo xilliga loo cayimay Diiwaan-gelinta iyo dhammaan wixii xog ah ee ay muwaaddiniintu u baahan yihiin in ay ogaadaan.
2. Waxaa waajib ah in la baro islamarkaana lagu wacyi geliyo muwaaddiniinta muhiimadda ay Diiwaangelintu leedahay.
Xilka iyo Waajibaadka Mas’uuliyiinta Diiwaangelinta
Xilka iyo waajibaadka mas’uuliyiinta Diiwaangelinta waxaa ka mid ah in:
1. Mas’uulka diiwaangalinta ee heer Degmo waxaa ku waajib ah in uu ka war bixiyo diiwaangelinta qabsoontay todobaad walba una gudbiyo Mas’uulkiisa heer Gobol xog faahfaahsan oo ku saabsan sida ay diiwaangelintu uga qabsoontay todobaadkii tagay Degmadiisa.
2. Mas’uulka heer Gobol ka dib marka uu soo uruuriyo warbixinta degmooyinka wuxuu u gudbinayaa Wasaaradda Arrimaha Gudaha warbixin dhamaystiran.
Habka Xafidaadda Qalabka Diiwaangelinta
1) Hawlmaalmeedka goobta diiwaangelinta waxaa la bilaabayaa 7:00 subaxnimo, waxaanay dhammaanaysaa 6:00 galabnimo.
2) Haddii dib-u-dhac ku yimaado saacada furitaanka ee goobta waa in lagu caddeeyo war bixinta sababta keentay dib u dhacaas.
3) Haddii dib-u-dhacu aanu garawshiiyo lahayn waa in masuulka diiwaangelinta ee degmadu talaabo ka qaadaa, sidaasina uu war bixinta ku guddbiyaa.
4) Marka ay dhammaato hawl-maalmeedka shaqo ee diiwaangalintu dhammaan qalabka diiwaangelinta waxaa lagu haynayaa Xafiisyada Diiwaangelinta.
Si loo dhaqan-geliyo Diiwaangelinta, waa in la shaqaaleeyaa shaqaale khibrad iyo xirfad u leh dhaqan-gelinta Diiwaangelinta iyada oo inta aan qofka la shaqaalaysiin ka hor la qeexo:
1. Shuruudaha iyo xirfadaha looga baahan yahay qofka loo qaadanaayo booska uu ka hawl gelayo.
2. Habka loo raacayo xulashada Shaqaalaha; iyo
3. Waajibaadyada shaqo ee qof kasta (boos kasta) uu ku lahaanayo geeddi-socodka hawsha Diiwaangelinta.
Shuruudaha Shaqaalaha ka Hawlgelaya Diiwaangelinta
Qofka loo qaadanayo Xafiisyada kala duwan ee sugidda Muwaadinnimo Waa:
1. In uu yahay Muwaadin reer Somaliland ah.
2. In aan da’diisu ka yaraan 25 jir.
3. In uu Maskax ahaan Caafimaad qabo.
4. In aanu xukun Maxkammadeed oo kama-dambays ahi ku dhicin.
5. In uu leeyahay aqoon heer-jaamacadeed ama wax-u-dhigma.
6. Waa in uu ku sifoobaa karti, daacadnimo iyo aaminaad, Bulshada dhexdeedana sumcad ku leeyahay.
Waxa reebban in ay hawsha Diiwaangelinta ka hawl galaan:
1. Qofka aanu xuskiisu dhamayn (waalan).
3. Ajnabiga dalka gudihiisa ku sugan.
4. Qofka aan gaadhin da’da Lix iyo Toban sano.
Dhaarta Hawl-wadeenada Ka-hawl-gelaya Diiwaangelinta Muwaadinka
Xubnaha loo magacaabay goobaha diiwaangelinta degmada iyo gobolka waxa dhaarinaya guddoomiyaha Maxkamadda Degmada (dhaar fagaare), dhaartaas oo noqonaysa sidan:
“WAXA IGU WALAAHIYA OO IGU BILAAHIYA INAAN HAWSHA DIIWAAN GELINTA U GUDAN DOONO SI XILKASNIMO IYO DAACADNIMO LEH, SHARCIGA IYO CADAALADDANA AAN KU SHAQAYNAYO”
Qodobo kala Duwan
Habka Qoraalka Magacyada
Magaca muwaadinka waa in lagu qoro xuruuf la isku wada sar-gooyey; waana in aanay kala duwanaanin xuruufta iyo qoraalka ay mas’uuliyiintu u adeegsanayaan diiwaangalinta.
Saxitaanka Xogta Khaldanta
Saxitaanka xogta khaldan waxaa loo raacayaa sidan soo socota:
1. Qof kasta oo ogaada in xogta laga qoray ee diiwaanka lagu qoray ay wax ka qaldan yihiin, waa in uu qoraal ahaan ku war geliyaa mas’uulka diiwaangalinta xogta khaldan, isla markaana ku xusaa qoraalka sida saxda ah.
2. Mas’uulka la soo gaadhsiiyey xogta khaldantay waa inuu sida ugu dhakhsaha badan u sameeyo sixitaan, warbixintana u gudbiyo mas’uulka ka sareeya.
Bixinta Warqadda aqoonsiga
Muwaadin kasta oo is diiwaangeliyey wuxuu xaq u leeyahay in la siiyo warqadda aqoonsiga.
Reebbanaanta qaadashada Wax-ka-badan Hal Warqad Aqoonsi
1. Waxaa reebban in muwaadinku uu qaato wax ka badan hal warqad aqoonsi.
2. Waxaa reebban in lagu helo si khiyaamo ama been abuur ah ama lagu siiyo muwaadinka si ka baxsan Nidaamka Diiwaangelinta.
3. Qofkasta oo ku kaca falka ku xusan faqradda hore waxa lagu ciqaabi doonaa sida uu tilmaamaayo Xeerka Ciqaabtu, Hay’ad kasta oo awood u lehna waxa uu xil ka saaran yahay inay talaabo sharci ka qaado.
4. Qof kasta oo si badheedh ah u siiya mas’uulka diiwaan-gelinaya xog qaldan, waxa uu mutaysanayaa in lagu Ciqaab mariyo sida uu dhigayo Xeerka Ciqaabtu.
Previous article13 jir Dhererkiisu 2.26 Mitir oo noqday ciyaartoyga kubadda kolayga loogu baadigoobka badanyahay
Next articleUCID oo xilal magacaabay